प्रचण्डकोे दुईघेरे सचिवालयमा को को ? – Online Bichar
प्रचण्डकोे दुईघेरे सचिवालयमा को को ?
Online Bichar 26th December, 2017, Tuesday 7:45 AM
काठमाडौं ः दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, शान्तिप्रक्रियादेखि अहिलेसम्मको देशको राजनीतिमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दाहालको दैनिकी अत्यन्त व्यस्त छ । छोरा प्रकाशको कुशल व्यवस्थापनले उनको व्यस्त दैनिकी सहज बनाएको थियो । तर प्रकाशको निधनपछि अहिले उनको सचिवालयको सहज व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको छ । प्रकाशको ‘अब्बल’ व्यवस्थापनमा उनी निस्फिक्री र ढुक्क थिए ।
सचिवालयमा प्राविधिक, सांगठनिक र व्यवस्थापनमा अहिले उनलाई छोराकोे टड्कारो अभाव खट्किएको छ । पार्टी संगठन, दैनिक कार्यक्रमका अतिरिक्त दाहालले अहिले घर परिवारलाई पनि बढी समय दिनु परिरहेको छ । अहिले उनको सचिवालयलाई ‘समय व्यवस्थापन’ गर्न सबैभन्दा धेरै कठिनाइ हुन थालेको छ ।
दाहालले प्रकाशको अभावमा आफ्नो सचिवालय हेर्ने गरी नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने सोचेका छन् तर त्यसको टुंगो लगाइसकेका छैनन् । खुमलटार स्रोतका अनुसार उनले राजनीतिक घटनाक्रम केही सहजतामा चल्नेबित्तिकै सचिवालय व्यवस्थित गर्ने योजना बनाएका छन् । पहिलो घेरा दाहालले अहिले पार्टी्भित्र सबैभन्दा बढी कृष्णबहादुर महराको विश्वास गर्छन् । पोस्टबहादुर बोगटीको निधनपछि उनले आफ्ना विश्वासपात्रका रूपमा महरालाई लिन थालेका हुन् ।
दाहालले आफूले लिने नयाँ स्टेपपछि त्यसलाई व्यवहारतः कार्यान्वयनमा लैजानका लागि भने वर्षमान पुनलाई सम्झने गर्छन् । प्रायःजसो पार्टी निर्णय वा दलीय सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बनाइने ‘कार्यदल’ मा दाहालले वर्षमानलाई समेट्न छुटाउँदैनन् । पछिल्लोपटक एमाले माओवादी चुनावी तालमेलको भागबन्डा लगाउन बनाइएको कार्यदलभित्र पनि उनी समेटिएका थिए । माओवादी पार्टी एउटै हुँदासम्म दाहालको पहिलो घेराभित्रै पर्थे, रामबहादुर थापा पनि । तर बीचको केही वर्ष थापा पार्टी विभाजनमा गएपछि उनको ठाउँ ‘रिप्लेस’ गर्न आइपुगे नारायणकाजी श्रेष्ठ ।
दाहालको दोस्रो घेरामा हरिबोल गजुरेल, जर्नादन शर्मा, अग्नि सापकोटा, चक्रपाणि खनाल, शक्ति बस्नेत, पम्फा भुसाललगायत नेता छन् । पार्टीले थप केही निर्णय लिनुपर्दा दाहालले पार्टी्भित्र केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बोलाएर निर्णय लिने गर्छन् । तर त्यसभित्र पनि थप छलफल गर्नुपर्दा वा सहयोग लिनुपर्दा उनले गजुरेल, शर्मा, सापकोटा, बस्नेत र भुसाललगायत नेतालाई बोलाउने, परामर्श गर्ने गर्छन् ।